WordPress: Dynamic Meta Nkọwa na nke ọ bụla Post | Martech Zone
WordPress: Dynamic Meta Nkọwa na Post ọ bụla
Monday, July 2, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndabara WordPress gị na-akọwapụta otu nkọwa nke ibe ọ bụla nke saịtị gị, n'agbanyeghị peeji nke mmadụ rutere na njin ọchụchọ. Na nkọwapụta na igwe nchọta ahụ enweghị ike ịkọwa post nke dị na blọọgụ nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara ịpị njikọ gị.
Echeghị m banyere nke a ruo na ngwụsị izu a mgbe m natara nyocha na-esonụ nke saịtị m site na BlogStorm:
Ọ dị mma, ihe dị mfe iji jikọta idide azụ! Gbalịa itinye ụfọdụ bọtịnụ ndenye aha mmekọrịta mmadụ na ibe gị na ụfọdụ nkọwa nkọwa pụrụ iche na ibe ọ bụla.
Monetizing blog dị ka nke a siri ike, ọ bụrụ na ịnwale ihe niile John Chow gbalịrị mgbe ahụ ị ga-anọ n'ụzọ ziri ezi.
Na ụfọdụ pụrụ ichetụ n'echiche na ọtụtụ njikọ baiting ị ga-enwe ike iji nweta ezuru njikọ ọnọdụ maka ụfọdụ n'ezie ezi okwu (ma eleghị anya ị na-ama). Ozugbo ị kwụrụ maka okwu ndị a, ịnwere ike ịrapara na njikọta mgbakwunye na Adsense na ibe ahụ wee rite uru.
Inyocha saịtị gị bụ ihe dị egwu n'ihi na ọ ga-amatakarị ụfọdụ esemokwu na saịtị gị nke ị na-adịghị a attentiona ntị. N'okwu a, ọ bụ nkọwa mkpado meta maka nke ọ bụla na ederede m. A na-eji nkọwa Meta site na engines ọchụchọ iji tinye nkọwa dị mkpirikpi nke ibe edepụtara na nsonaazụ. Ebe ndị mmadụ ga-ahụ peeji dị iche iche mgbe ha na-achọ gị, gịnị ma ị tinye nkọwa meta dị iche iche maka ibe gị ọ bụla?
Emegoro m gbanwee nkụnye eji isi mee ịgụnye isiokwu dị ike maka isiokwu m meta meta ma ọ nyerela aka mee ka ọkwa m ụfọdụ ka mma. Itinye nkọwa dị iche iche nwere ike ọ gaghị eme ka ọnọdụ ọchụchọ m dịkwuo elu, mana ka BlogStorm gosipụtara - ọ nwere ike ibute mmekọrịta mụ na ibe m site na nsonaazụ ndị na-achọ.
Nkọwa nke Ngwọta
Ọ bụrụ na ibe dị na saịtị m bụ otu ibe, dị ka mgbe ịpịrị otu post, ịchọrọ edemede nke ibe ahụ. Achọrọ m ka ihe edemede ahụ bụrụ okwu 20 mbụ na 25 nke post mana achọrọ m nyocha HTML anyị ọ bụla. Luckily, WordPress nwere ọrụ nke ga-enye m ihe m chọrọ, _nke_u_u. Agbanyeghị na ebughị ya maka ojiji a, ọ bụ ụzọ dị omimi iji tinye mmachi okwu ma wepụsị ihe niile HTML!
Enwere m ike ịme nke a ọzọ ma jiri ya Ntinye Nhọrọ n'ime WordPress iji jupụta nkọwapụta meta, mana ugbu a nke a bụ ụzọ mkpirisi dị mma! (Ọ bụrụ na iji usoro a ma tinye Nhọrọ Nhọrọ, ọ ga-eji ihe ahụ maka nkọwa Meta).
Ọrụ a chọrọ ka ị kpọọ ya n'ime Loop, yabụ enwere ụfọdụ mgbagwoju anya na ya:
IHE: Jide n'aka na dochie “My ndabere nkọwa” na ihe ọ bụla ị ugbu a nwere ma ọ bụ ga-amasị gị blog si meta nkọwa.
Ihe koodu a na-eme na-enye nkọwa ndabara meta maka blọọgụ gị ebe ọ bụla kama na ibe Single Post, na nke ọ na-ewe okwu 20 izizi wee wepụ HTML niile na ya. M ga-aga n'ihu na-eme nke ọma koodu (wepụ ahịrị) na ijikọ 'ọ bụrụ nkwupụta' ma ọ bụrụ na enwere Nwepu nhọrọ. Nọrọ na-ekiri!
Tags: ike meta nkọwankọwa nkọwaAWordPress
Text Link Ads Dethrones Google Adsense (na m Blog)
Julaị 2, 2007, elekere 4:16 nke ehihie
Nke a bụ Doug mara mma. Daalụ maka ịkekọrịta!
Julaị 2, 2007, elekere 5:10 nke ehihie
Ọ dị mma Doug, a na m atụ anya ịhụ ọganihu a. Nke m bụ obere ọrụ botch ugbu a (echere m), yabụ enwere m obi ụtọ ịhụ onye ọzọ na-arụsi ọrụ ike!
Julaị 2, 2007, elekere 8:25 nke ehihie
Otu ndetu - emelitere m post ahụ ebe m chere na ị ga-eme ezi uche ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri “Nhọrọ Nhọrọ” na post. Otú ọ dị, ị na-adịghị - na Optional Excerpt ga-akpaghị aka ga-egosipụta ma ọ bụrụ na ọ na-utilized… ọzọ mma mma nke_excerpt na the_excerpt_rss ọrụ.
Jul 3, 2007 na 7: 10 AM
Hahaha...! Ị chọrọ n'ezie ịkụ John Chow, ọ bụghị gị? ^^ mara mma!
Jul 3, 2007 na 7: 30 AM
Ime ihe karịrị $10k kwa ọnwa na blọọgụ m ga-adị mma! Agbanyeghị, John (“Enyi mebere” na onye m nwere nkwanye ugwu dị egwu) na-etinye nnukwu ego na ịkwụ ụgwọ maka nlebara anya. Google na Technorati batara ya nsogbu n'oge na-adịbeghị anya - ndị a nwere ike imerụ ya ahụ nke ukwuu na ego ọ na-enweta n'ọdịnihu.
Ma enwere m ekele na ụmụ okorobịa dị ka ya nwere ikike ịkwanye oke - John na-ahapụ ụmụ okorobịa dịka m mara ebe akara dị!
Julaị 3, 2007, elekere 11:15 nke ehihie
Naanị nsonye, ​​achọpụtara m ihe niile dị na otu SEO ngwugwu WordPress ngwa mgbakwunye nke ahụ ga-emere gị nke a!
Aga m adọkpụrụ ụfọdụ nke m koodu n'izu a na mmejuputa atumatu a plugin kama na-ihe dị ọcha. IHE: Achọtara na John Chow's Blog.
Jul 4, 2007 na 11: 32 AM
Kedu maka ịgụnye aha otu na aha blọgụ maka ọkwa ọ bụla…. Nke a ọ na-akawanye mma na ihe SEO? Eche m!
Jun 17, 2008 na 2: 53 PM
Ọ bụrụ na ị na-agba YAPB dị ka ihe ngwọta onyonyo gị, koodu a ga-adọta onyonyo ndu gị n'ime meta wee gosipụta ya n'elu ahụ mgbe ị na-elele njedebe ihu.
Nov 27, 2008 na 2:19 ehihie
Daalụ maka koodu, ejiri m “nkọwa nke ndabara m” dochie ya